धनगढीको नयाँ घरले कैलाली–५ मा चम्काइदेला आरजुको भाग्य ?
नारदमुनी र दिनेश : आरजुका ‘डबल’ चुनौती
Tuesday, 14 Nov, 2017 4:21 PM
२८ कात्तिक, धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशमा मौसम जाडोउन्मुख छ, चुनाव गर्मीउन्मुख । प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु चुनावी मैदानमा खेलाडी बनेकाले कैलाली क्षेत्र नं. ५ झन् तात्तिएको छ ।
कैलालीमा देउवा परिवारको कुनै जायजेथा थिएन । आरजुले कैलाली ५ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्दासम्म पनि यो ठाउँ केवल आवश्यकताको भाँडोमात्रै थियो । त्यसैले त उनीमाथि ‘टुरिष्ट’ उम्मेदवारको आरोप लाग्यो । चुनावकै लागि भएपनि आरजु कैलालीमा अस्थायी घरबास गर्ने योजनामा पुगिन् । धनगढीमा घर हालिन्, तीन करोड रुपैयाँको । हाल बैना बुझाएर आरजु धनगढी–४ उत्तरबेहेडीस्थित शारदा हमालको नाममा रहेको दुईतले सुविधा सम्पन्न घरमा बस्न थालिसकेकी छिन् ।
तर, के धनगढीको नयाँ घरले कैलालीमा चम्काइदेला आरजुको भाग्य ?
–नारदमुनी राना, आरजु देउवा र दिनेश भण्डारी बायाँबाट क्रमशः
नयाँ घरको असर आरजुको पक्ष र विपक्ष दुवैतिर पर्ने सम्भावना धनगढीका पुराना राजनीतिकर्मीहरु अनुमान लगाउँछन् । उनको नयाँ घरले चुनावी क्षेत्रका मतदातामा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ । घर किनिसकेपछि देउवापरिवार आफ्नै छिमेकी भएको महसुस केही मतदाताले गरेपनि अधिकांशले चुनावी ‘नौटंकी’का रुपमा बुझेका छन् । तर, टुरिष्ट उम्मेदवारको ट्यागलाई प्रतिद्वन्द्वीले चुनाव हराउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग नगरोस् भनेरै आरजुले ‘नयाँ घर’ योजना ल्याएकी हुन् ।
राजनीतिमा देउवापत्नीको ‘ट्याग’बाहेक योगदान नभएकी आरजुले सुदुरपश्चिमलाई ‘सुनको टुक्रा’ बनाउँछु भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेको भन्दै प्रतिद्वन्द्वीले ‘क्रस फायर’ गरेको छ ।
त्यसो त आरजुलाई कैलाली ५ मा घरेलु र बाह्य, दुवै खतरा छ । काँग्रेसभित्रै उनको उम्मेदवारीलाई लिएर असन्तुष्टी छ भने वाम गठबन्धनका उम्मेदवारको चुनौति कमजोर छैन । वाम उम्मेदवार नारदमुनी राना आरजुका प्रतिद्वन्द्वी हुन् ।
कैलाली क्षेत्र नं. ५ मा साविकको क्षेत्र नं. ६ का अधिकांश भाग पर्छ । धनगढी उपमहानगरपालिका र कैलारी गाउँपालीकाका वडा नं. ६ र ९ क्षेत्र नं. ५ मा पर्छन् । ०७० को निर्वाचनमा कैलाली ६ बाट शेरबहादुर देउवाले जितेका थिए । पतिको त्यही विरासतमा झण्डा गाड्ने दाउ आरजुको हो । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामअनुसार यो क्षेत्रमा कम्युनिष्ट गठबन्धन कांग्रेसभन्दा ६ हजार बढी मतले अगाडि छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको मतअनुसार कैलाली–५ मा पर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकामा कम्युनिष्ट गठबन्धनले २३ हजार ५७१ मत ल्याएको थियो भने काँग्रेसले १६ हजार ४३८ मत प्राप्त गरेको थियो । काँग्रेसमा विलय भएको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले धनगढीमा १३ सय ८३ मत प्राप्त गरेको थियो । यो सम्पूर्ण मतको हिसाब गर्दा उपमहानगरपालिकामामात्रै कम्युनिष्ट गठबन्धन काँग्रेसभन्दा ५ हजार ७२६ मतले अगाडी छ ।
क्षेत्र नम्बर ५ मा पर्ने कैलारी गाउँपालिकाका ६ र ९ नं. वडामा कम्युनिष्ट गठबन्धनको १७ सय २३ र कांग्रेस (तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमसहित)को १३ सय ६५ मत छ । दोस्रो तहको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम हेर्दा आरजुसामु निर्वाचन सहज देखिन्नँ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवार गोपाल हमालले ११ हजार ५२७ मत प्राप्त गरेका थिए । कांग्रेसले धनगढीका मेयरमा नृप ओडलाई टिकट दिएपछि कांग्रेसका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ता खुलेरै हमालको पक्षमा प्रचारमा हिँडेका थिए । आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हमालकै पार्टी विवेकशील साझाका दिनेश भण्डारी उम्मेदवार छन् । उनी कैलाली उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन् । उनको उम्मेदवारीले पनि वामका नारदमुनीलाईभन्दा काँग्रेसकी आरजुलाई असर गर्ने देखिन्छ ।
खशोज्गी हत्याः इतिहासकै नराम्रो ढाकछोप : ट्रम्प, हत्यारालाई अमेरिकाले कारबाही गर्ने
७ कात्तिक नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न थालिएको छ । रु आठ करोड ३५ लाखको लागतमा आगामी दुई वर्षभित्र सो भवन निमार्ण गरिने लक्ष्य रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले बताए । भैरहवास्थित प्राकृतिक निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको सो भवनमा ४८ वटा कोठा हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गा पौडेलले जानकारी दिए । पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिका–६ मा रहेको भाग्योदय आधारभूत विद्यालयमा